Editor, Author at SPORTS MYANMAR - Page 883 of 937
ဒီရာသီ ဘယ်ပွဲစဉ်က ယူနိုက်တက် အသင်းအတွက် အလှည့်အပြောင်း ဖြစ်စေခဲ့သလဲ ဆိုတာ ဖွင့်ဟလိုက်တဲ့ လုခ်ရှော
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ ဘယ် နောက်ခံလူ ဖြစ်တဲ့ လုခ်ရှော က ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီလ တုန်းက FA ဖလား ပြိုင်ပွဲ မှာ ထရန်မီးယား အသင်း ကို0–6ဆိုတဲ့ ရလဒ် နဲ့ အဝေးကွင်း နိုင်ပွဲ ရရှိ ခဲ့ခြင်း က …
ကမ္ဘာကျော် နည်းပြ ဆယ်ယောက်ရဲ့ မဲပေးမှုမှာ မက်ဆီ နဲ့ ရိုနယ်ဒို တို့ ဘယ်သူ ပိုပြီး အမှတ်ရခဲ့သလဲ ?
April 13, 2020 April 13, 2020 - by Editor
မက်ဆီ နဲ့ ရိုနယ်ဒို တို့ ရဲ့ ငြင်းခုန်မှု ကတော့ ဘယ်လို အချိန် ၊ ဘယ်လို ကာလ မျိုး မှာ မဆို အပြီး မသတ် နိုင်တဲ့ ပုစ္ဆာ တစ်ခု လို ဖြစ်နေ ဆဲပါပဲ ။ မက်ဆီ က ရိုနယ်ဒို ထက် ဘောလုံး စွမ်းရည် …
အူဘာမီယန်း အနေနဲ့ အာဆင်နယ် အသင်းမှာ ဘာကြောင့် ဆက်နေသင့်သလဲ ဆိုတာ ရှင်းပြလိုက်တဲ့ ပေါလ်မာဆင်
ဂန်းနား ဂန္တဝင် ကစားသမားဟောင်း ပေါလ်မာဆင် က အူဘာမီယန်း ကို အာဆင်နယ် ကနေ ထွက်ခွာဖို့ တိုက်တွန်း ခဲ့တဲ့ ဂါဘွန် ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ရဲ့ စကားကို တုန့်ပြန် ပြောကြားလိုက်ပြီး အူဘာ အနေနဲ့ အသင်းမှာ ဆက်နေသင့်ကြောင်း တိုက်တွန်း ပြောကြား လိုက်ပါတယ် ။ ဂါဘွန် ဘောလုံး …
ဘိုင်ယန်တို့ ဗာရန်းကို လက်လွှတ်ခဲ့ရပုံကို ရင်နာနာနဲ့ ထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့ ဆက်ညော
ဝီလီဆက်ညောက ဘိုင်ယန်မြူးနစ် အသင်းဟာ ရာဖေးဗာရန်း လန်းစ် အသင်းမှာ ကစား ခဲ့စဉ်က ယူရို ၅ သန်း ဆိုတဲ့ ငွေကြေး ပမာဏကို ပေးချေ သွားဖို့ ဆန္ဒမရှိခဲ့ဘူးလို့ ဆိုလိုက်ပြီး ဒီအတွက်ကြောင့်လည်း သူ့အနေနဲ့ ပြင်သစ် နောက်ခံလူကို ရီးရဲယ်မက်ဒရစ် အသင်းရဲ့ မပြောင်းရန် တားဆီး နိုင်ဖို့ မတက် နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ ထုတ်ဖော် …
ယူနိုက်တက်ကို အင်္ဂလန်ရဲ့ အချမ်းသာဆုံး အသင်းလို့ ညွှန်းဆိုရင်း ဂလေဇာ မိသားစုကို သွေးတိုးစေမယ့် တိုက်တွန်းမှု တစ်ခု လုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့ လီဗာပူး ဂန္ဓဝင် ဒန်နီ မာဖီ
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ဟာ လက်ရှိ ပရီးမီးယား လိဂ် ပွဲစဉ် တွေကို ရပ်နား ထားတဲ့ အချိန် မှာ လာမယ့် အပြောင်းအရွှေ့ အတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင် မှုတွေ လုပ်ဆောင် နေခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့် အားနည်းချက် တွေ ဖြစ်တဲ့ ညာ တောင်ပံ တိုက်စစ် နေရာ နဲ့ …
ဟယ်ရီကိန်း ကို စံချိန်တင်ဈေး နဲ့ ရောင်းဖို့ စိတ်ကူးနေတဲ့ စပါး ၊ မန်စီးတီး ရဲ့ တိုက်စစ်မှုး ပစ်မှတ်သစ် နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး အသင်း အကြီး အကဲ ဒန်နီရယ် လီဗိုင်း ဟာ လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ် နေတဲ့ ကျန်းမာရေး ကပ်ဆိုးကြီး အပြီး မှာ အသင်းရဲ့ ဘဏ္ဍာရေး အခြေအနေ မယိုင်လဲ စေဖို့ တိုက်စစ်မှုး ဟယ်ရီ ကိန်း ကို ရောင်းထုတ် ဖို့ စဉ်းစား လာပြီလို့ သတင်း ပေါ်ထွက် …
အင်္ဂလန်မှာဟော့နေတဲ့ ဂရီလစ်ချ် ပြောင်းရွေ့နိုင်တဲ့ အသင်း ၃ သင်းကို ပြောပြလိုက်တဲ့ ဒါရင်းဘန့်
April 12, 2020 April 13, 2020 - by Editor
တော့တင်ဟမ် တိုက်စစ်မှုးဟောင်း ဒါရင်းဘန့်က မန်ချက်စတာစီးတီး ၊ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် နဲ့ စပါး တို့ အားလုံးဟာ အက်စတွန်ဗီလာ အသင်းခေါင်းဆောင် ဂျက်ဂရီလစ်ချ် ကို ခေါ်ယူနိုင်ရန် အခွင့်အရေး ရှိနေ ကြတယ်လို့ ဆိုလိုက်ပေမယ့် အိုးထရပ်ဖို့ဒ်ဟာ အင်္ဂလန် စတား ပြောင်းရွေ့ဖို့ အဖြစ် နိုင်ဆုံး နေရာ ဖြစ်တယ်လို့ ယူဆ နေပါတယ်။ အက်စတွန်ဗီလာဟာ …
ကမ္ဘာ့ ဂိုး အပြတ်ဆုံး နိုင်ငံတကာပွဲကြီးမှာ ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တာလဲ ?
April 12, 2020 - by Editor
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၉ နှစ် ရဲ့ မနေ့ က လို နေ့မျိုးမှာ နိုင်ငံ တကာ လက်ရွေးစင် အသင်းတွေရဲ့ တရားဝင် ပြိုင်ပွဲ သမိုင်း တစ်လျောက် မှာ ဂိုးအပြတ်ဆုံး နိုင်ပွဲကြီး တစ်ခု ပေါ်ပေါက် ခဲ့ပါတယ် ။ အဲ့ဒါ ကတော့ ၂၀၀၂ ကမ္ဘာ့ ဖလား ခြေစစ်ပွဲ ရဲ့ …
ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလား ကို ဒီနှစ်မရလည်း နောက်နှစ်ရလိမ့်မယ်လို့ ဆိုလိုက်တဲ့ အီရန်အေရီ
လီဗာပူး အသင်းဟာ အကယ်လို့များ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလား ကို မဆွတ်ခူး နိုင်ခဲ့ဘူး ဆိုရင်လည်း ယာဂန်ကလော့ ရဲ့ အသင်းဟာ နောက်တစ်ခါ ပြန်လာကာ အမှတ်ပေးဖလား ကို ဆွတ်ခူး နိုင်လိမ့်မယ်လို့ အီရန်အေရီ က ဆိုသွား ပါတယ်။ ယာဂန်ကလော့ ရဲ့ အသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီက ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလား …
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းကို တစ်ဖန်ပြန်လည် ခမ်းနားစေမယ့် ကစားသမား သုံးဦးအမည်ကို ထုတ်ဖော် ပြောကြားလိုက်တဲ့ #အစ်ဂ်ဟာလို
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းဆီ အငှား လာရောက် ကစားနေတဲ့ တိုက်စစ်မှူး အစ်ဂ်ဟာလို က လက်ရှိ အသင်း ရဲ့ ကွင်းလယ်ပိုင်း မှာ ပေါ့ဂ်ဘာ နဲ့ ဘရူနို ဖာနန်ဒက်စ် တို့ ပူးပေါင်းခြင်းက အောင်မြင်တဲ့ နေ့စွဲ တွေကို တစ်ဖန် ပြန်လည် မြင်တွေ့ စေနိုင် လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ကြောင်း ထုတ်ဖော် …
အာဆင်နယ် အသင်း ကနေ ထွက်ခွာခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ မှားယွင်းသွားကြောင်း ဝန်ခံလိုက်တဲ့ ဝီလ်ရှိုင်းယား
ဂန်းနား ကွင်းလယ်လူဟောင်း ဂျက်ဝီလ်ရှိုင်းယား က အာဆင်နယ် အသင်းကနေ ထွက်ခွာပြီး ဝက်စ်ဟမ်း အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ဟာ သူ မျှော်မှန်းထားသလို အလုပ် မဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံ ပြောကြား လိုက်ပါတယ် ။ ဝီလ်ရှိုင်းယား ဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် နွေရာသီ အပြောင်းအရွှေ့ ကာလမှာ ဝက်စ်ဟမ်း အသင်းကို …
ယူနိုက်တက် အသင်းကို ချစ်ပေမယ့် ဘာ့ကြောင့် မပြောင်းရွှေ့ ခဲ့တာလဲဆိုတာ ဖွင့်ပြောလိုက်တဲ့ ရောမသား ဂ န္တဝင်ဒီရော့စီ
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီ တုန်းက ဘောလုံး အားကစား မှ တရားဝင် အနားယူ သွားခဲ့တဲ့ ရိုးမား အသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်ဂ န္တဝင် ကစားသမားဟောင်း ဖြစ်သူ ဒန်နီယယ် ဒီရော့စီ က သူဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ကို အမြဲလို ချစ်မြတ်နိုး ပေမယ့် အသင်း မပြောင်း ခဲ့ကြောင်း ထုတ်ဖော် …
Previous 1 … 882 883 884 … 937 Next